Dagaal dhexmaray Ciidanka Jubbaland iyo Al-Shabaab & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Warar Xiiso Leh Dagaal dhexmaray Ciidanka Jubbaland iyo Al-Shabaab & Wararkii ugu dambeeyay
Dagaal dhexmaray Ciidanka Jubbaland iyo Al-Shabaab & Wararkii ugu dambeeyay
J/Hoose (Halqaran.com) – Dagaalkaan oo u dhaxeeyay Ciidamo katirsan kuwa Dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland oo wada jira iyo Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa uu ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni oo kamid ah deegaannada hoostaga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Wararka ayaa sheegaya, in dagaalkan uu yimid kaddib markii Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland oo wada howlgallo amniga lagu xaqiijinayey ay weerar kala kulmeen Xubno katirsan Al-Shabaab, sida ay sheegeen Saraakiil katirsan Ciidamada Jubbaland.
Dad ku sugan deegaanka Baar-Sanguuni halkaas oo Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ay Saldhig ku leeyihiin ayaa waxaa ay sheegeen in uu jiro dagaalkaas, hayeeshee aysan cadeyn karin khasaaraha ka dhashay.
Wararkii ugu dambebeeyay aan ka heleyno deegaanka Baar-Sanguuni iyo deegaannada ku dhow dhow ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ay wadaan howlgallo kala duwan oo ka dhan ah Al-Shabaab.
Ciidanka Jubbaland iyo Al-Shabaab